गर्भावस्थामा शारिरिक सम्पर्क कसरी राख्ने ? अपनाउनुहोस् यस्ता नयाँ तरिका - Experience Best News from Nepal
गर्भावस्थामा शारिरिक सम्पर्क कसरी राख्ने ? अपनाउनुहोस् यस्ता नयाँ तरिका
तपाईंले के भन्न खोज्नुभएको हो, त्यति स्पष्ट छैन । कुनै पुरुषले आफ्नी श्रीमतीसँग शारिरिक सम्पर्क गर्नु स्वभाविक हो । सम्भवत: तपाईंसँग गर्भावस्थामा शारिरिक सम्पर्क राख्नु हुन्न भन्ने सोच गढेको छ वा तपाईंलाई शारिरिक सम्पर्कप्रति रुचि छैन । तपार्इंलाई थाहै होला, गर्भावस्थामा महिलाको शरीरमा हार्मोनको मात्रामा उतारचढाव आउँछ । यसले गर्दा चाहना नहुने हुन्छ ।
महिनावारी भएको बेला गर्भ रहन्छ ? यस्ता छन् भ्रम र यथार्थहरु
यी अवस्थामा आउँछ युवतीको दिमागमा शारिरिक सम्पर्क राख्ने चाहना
शारीरिक सम्पर्क गर्दा पुरूषलाई भन्दा महिलालाई किन बढी फाइदा हुन्छ ! जान्नुहोस्